अजयको पक्षमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार
काठमाडौँ, २४ पुस । सर्वोच्च अदालतले अजय सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीको रकम नरोक्नु भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज सो उद्योगमा आएको लगानीमा आएको रकम नरोक्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले यही पुस १० गते सो सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आजका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बेलाएको थियो । सुनुवाईपछि पहिलो सुनुवाईमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
जोशीको इजलासले सो उद्योगको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नरोक्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सुर्खेतमा रहेको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सुमार्गीको खातामा जम्मा भएको थियो । रासस
पूर्वराष्ट्रपति यादवले विमोचन गरे डा. महतको ‘ट्रेल्स, ट्रेमोर्स एण्ड होप’
सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले आफ्नो धारणा राखिसक्यो : मन्त्री अर्याल
हिमालय एयरलाइन्सको क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान शुरु
नागढुङ्गा सुरुङमार्गः जापानी निर्माण संस्थाले काम थाल्यो
राष्ट्रपति भण्डारीले दिईन् साग खेलाडीलाई बधाई
चेतनाको कमिले उपभोक्ता ठगिए : मन्त्री भट्ट
भरतपुर विमानस्थल खुल्यो
लोकसेवा आयाेगले माग्यो १०९६ पदमा नयाँ कर्मचारी (सूचनासहित)
सडकमा माग्न बसेकाहरुलाई तीनदिनभित्र हट्न महानगरको अपिल
११ महिनाको अवधिमा २० हत्याका घटना
कहिलेबाट सुरु हुँदैछ नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ खन्ने काम ?
पचास हजार घुस रकमसहित दुईजना प्रहरी पक्राउ
निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला हेर्न आउनेको घुइँचो